ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် နစ်ဆန်းတီဒါများ | နစ်ဆန်းတီဒါ ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Pearl White Nissan Tiida Latio 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်...
Black Nissan Tiida Latio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag...
Black Nissan Tiida Latio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Gold Nissan Tiida 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Pearl White Nissan Tiida 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Lks 88 ညှိနှိုင်း
White Nissan Tiida Latio 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenge...
Lks 94 ညှိနှိုင်း
White Nissan Tiida Latio 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag...
နစ်ဆန်း ကား ဘရန်များဟာ ဒုတိယ ဈေးကားဈေးကွက် အနေနဲ့ လိုက်ပါလျက်ရှိပြီး နစ်ဆန်း နာမည်ကြီး ကားတွေဟာ ကမ္ဘာ့မှာ နာမည်ရှိပေမဲ့လို့ ပြည်တွင်း သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ သုံးစွဲမူ နည်းနေပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် နစ်ဆန်း လာတီအိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်းလာတီအိုဟာ မိသားစုစီးကားတွေထက်မှာ တစ်ဆင့်ပိုပြီး သေးငယ်တဲ့ တံခါး လေးပေါက် ဆီဒန်ကားများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အစီးနည်းပြီး အနည်းအကျဉ်းသာ တွေ့နိင်ပါတယ်။ လူသိနည်းတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ ပုံစံက တိုယိုတာထဲက ဘယ်လ်တာ ကားနဲ့ ဆင်ပြီး ကားရှေ့ခေါင်းက နစ်ဆန်းတို့ရဲ့ ကား အမျိုးအစားတွေအတိုင်း ကြံခိုင်တဲ့ ပုံပေါက်ပြီး အနောက်ပိုင်းကလည်း ဇိမ်ခံ ဆလွန်ကားတွေနဲ့ ဆင်သွားပြီး လှပလျက်ရှိပါတယ်။ အတွင်းခန်းကလည်း တီတာ လာတီအိုနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ ပုံစံက လုံးဝ တူတူပါပဲ ။
နစ်ဆန်း လာတီအို အကြောင်းတစ်ချို့
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ နစ်ဆန်း မိသားစုစီးကား ဖြစ်တဲ့ တီတာ ဆီဒန်အတွက် နစ်ဆန်း တီတာ လာတီအိုလို့ နာမည်စပေးခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန် မားကတ်အတွက် လာတီအိုဆိုတဲ့ နာမည်ကို ၂၀၁၁ မှာ စပေးခဲ့ပါတယ်။နစ်ဆန်း လာတီအို ဟာ တီတာ လာတီအိုထက် ပိုပြီး သေးကာ ပြောင်းလဲထားတဲ့ နာမည်အောက်မှာ နိင်ငံတကာကို ကားအမျိုးအစားတစ်ခု အဖြစ် ရောင်းဖို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်. အခြား နာမည်ကွဲတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နစ်ဆန်း ဆန်နီ၊ နစ်ဆန်း အဲမယ်ရာ စသည့်ဖြင့် ခေါ်ကြပါတယ်။
နစ်ဆန်း တီတာ လာတီအိုကို ပထမဆုံး မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ နစ်ဆန်း တီတာ ရဲ့ ဆီဒန် ဗားရှင်းအဖြစ် ဂျပန်မှာ ဈေးကွက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခြားနိင်ငံတွေမှာ လည်း ဖြန့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နစ်ဆန်း လာတီအိုကို စဖြန့်တာက ၂၀၀၅ မှာပါ။ ထို နစ်ဆန်း လာတီအိုမှာ မော်ဒယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ၂၀၁၂ ထဲက မော်ဒယ် မှာတွေနိုင်ပါတယ်။